Wararka Maanta: Khamiis, Sept 7 , 2017-Kuliyad cusub oo lagu baranayo Cilmiga Dawooyinka oo lagu soo kordhiyay Jaamacada Benaadir
Khamiis, September, 07, 2017 (HOL) -- Jaamacadda Benaadir ee magaalada Muqdisho ayaa soo kordhisay sanadkan kuliyad cusub oo lagu baranayo cilmiga Dawooyinka taasoo si rasmi ah uga mid noqotay kuliyadaha ay horey laheyd Jaamacadda, iyadoo kuliyaddan ay tahay tii ugu horeysay nooceeda ee abid laga hirgeliyo Soomaalia.
Seminaar ku saabsanaa aqoonta ay xambaarsan tahay kuliyadan cusub ayaa gelinkii dambe ee shalay lagu qabtay Xarunta qeybta Daraasaadka Sare ee Jaamacadda Benaadir ee magaalada Muqdisho (Postgraduate Center) waxaana ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan Jaamacadda, arday wax ka barata Jaamacada iyo kuwa sanadkan ku biiraya iyo weliba aqoonyahanno kale.
Waxaa uu intaa ku daray in dawooyinka ay ka sameysan yihiin kiimikooyin kala duwan, ayna yihiin sida sakiin labo af leh oo kale, wuxuuna xusay in haddii uu qofku u isticmaalo sidii loogu talo ay leeyihiin waxtar balse haddii si qaldan loo isticmaalo ay ka dhalan karto dhibaato caafimaad iyo waxyeelo badan, sidaas awgeedna uusan iibin Karin qof aan aqoon buuxda u laheyn, wuxuuna xusay in shahaadada koowaad ee Bachelorka ay kuliyaddan ku bixin doonto muddo afar sano ah.
“Dedaal iyo juhdi fara badan oo muddo dheer soo socday socday kaddib, waxaan ku guuleysanay inaan sanadkan aasaaska u dhigno kuliyadda barashada Cilmiga dawooyinka oo dalka aan horey uga jirin” ayuu yiri gudoomiyaha Jaamacada Benaadir.
Waxaa uu sheegay Dr. Dalmar in aasaasida kuliyaddan ay timid kaddib markii jaamacaddu ay aragtay dhibaatooyinka baaxada leh shacabkeena ka heysta dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo taasoo ay ugu wacan tahay iyadoo aysan jirin dadkii aqoonta u lahaa.
Waxaa kaloo uu intaa ku daray Gudoomiyuhu in aqoonyahada barta culuunta dawooyinka ay yihiin hadda kuwa ugu fursadaha fiican, marka loo eego culuunta kale ee Caafimaadka, maadaama buu yiri aysan dalka horey u joogin aqoonyahano illaa heer Jaamacadeed bartay culuunta dawooyinka, wuxuuna xusay in ay jiraan ganacsato Soomaaliyeed oo ku fekeraya iney maalgeshi ku sameeyaan warshado soo saara dawooyinka balse ay arintaas ku adkaatay ka dib markii ay dalka ka waayeen aqoonyahano ku taqasusay dawooyinka iyo habka loo sameeyo.